Wariye wareysi ka qaaday nin qur baxaayay – The Voice of Northeastern Kenya
Wariye wareysi ka qaaday nin qur baxaayay
starfmke August 16, 2016
Bulshada ku wada xiriirta dhinacaas iyo baraha ay bulshada ku wada kulmaan ayaa waxa ay caro xoogan ka muujiyen kadib marki u wariye televishen u wareysi ka qaaday nin u gaari ku dhacay waxana ay wariyahaas ku eedeeyen in u caawin waayay ninkaas ee u ku dhacay gaariga oo u ka door biday in u wareysto inti u caawin lahaa.
Warbixintaan layaabka leh ayaa waxa ay si toos ah uga socotay mid kamid televiishanada kuyaala bartamaha America qaasatan gobolka El Salvador.
Wariyahan ayaa inti u caawin lahaa ninkan gariga ku dhacay ayaa xalada u kujiray ninkan u waxba kasoo qaadin oo waxa u iska watay oo kaliya shaqadiisa ahayd in u wareysi ku aadan sida u ninka gaariga ugu dhacay uu u qaado.
Dhibanahaan ayaa waxa shilka u galay u ahaa mid aad u xun shilkaas ayaa waxa u galay daqiiqada yar uun ka hor inta wareysiga aan laga qaadin.
Wararka qaar oo ay tabinaayen warbahiinta ka hawlgasha aagaasi ayaa waxa ay sheegayen in ninka oo aan la aqoonsanin isago maraya wadada u ku dhacay gaari kuwa xamuulka ah.
Videoga ninkan gaariga u ku dhacay oo ugu dambeynti laga saaray barta intarnetka ay Youtubeka ku leeyihiin ayaa waxa lagu arkaayay ninka u gaariga ku dhacay oo dhulka galan galanaya iyado oo u wariyihina u la dul taagan yahay microphonki.
Wariyaha oo u shaqeeya televishan ka hawlgalo halka ay dhacdadaas ka dhacday oo ah gobolka El Salvador ayaa televishanka u ka hawlgalaayay lagu magacaaba TVO Noticias
Wariyaha haweeneyda ahayd ayaa waxa ay ninka oo xaladiisa ay ahayd mid aad u xun oo laga deyrinaayo ay sida roobki oo kale su’alo la dul istaagtay waxana ay su’ashi ugu horeeysay oo ay weeydiisay ay ahayd sida ay wax u dhacayn,ninki oo la dhibaatonaayo jawaabta su’ashas ayaa waxa uu u sheegay waa ay igu dhaceen haddana aad ayan u xanuunsanaya.
Su’ashi labaad oo ay weydisay ayaa waxa ay ahayd in u arkayay baabuurka oo soo socday ka hor inta uusan ku dhicin.
Waxa ay sidoo kale weydiisay in u ninka jeclan lahaa in u aado isbitaalka balse inta u ka jawaabin ayaa waxa ay u boodey in ay weydiiso su’al kale oo ah halke ayad u socotay
Waxana ugu dambneynti la aaminsan yahay in u ninka goobti ku qur baxay.
← Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo billaabaya booqashada gobolka xeebta
Haweeney isku dayday in ay isbitaalka guud ee garissa ka xado cunug dhalaan ah oo la qabtay →